Torohevitra Mahasambatra ny Fianakaviana: Miezaha ho Modely
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Bengali Bichlamar Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Danoà Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Galoà Goujrati Goun Grika Groenlandey Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Letonianina Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Mbunda Mongol Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Manome modely ho an’ny zanakao ve ianao?
Tsy tokony ho mpitari-bato vilam-bava ny ray aman-dreny, ka hoe hafa ny lazainy nefa hafa ny ataony. Ahoana, ohatra, raha misy olona mitady anao, dia henony ianao miteny hoe: “Ataovy hoe tsy ao izy”? Afaka ny hanantena ve ianao hoe hilaza ny marina ny zanakao?
“Tsy mandaitra amin’ny ankizy ilay fomba fiteny hoe: ‘Aza ny ataoko no atao, fa izay lazaiko tanteraho.’ Ny azy ianarany daholo izay hitany sy reny. Ary izy mihitsy no hiteny anao, raha vao tsy mifanaraka amin’izay lazainao ny ataonao.”—David.
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Ianao izay mitory hoe: ‘Aza mangalatra’, mangalatra ihany ve ianao?”—Romanina 2:21.
Ny zavatra lazain’ny ray aman-dreniny no misy vokany kokoa amin’ny ankizy sy ny tanora, noho ny an’ireo mitovy taona aminy. Ianao àry no tokony hanoro ny zanakao ny lalana tokony hizorany. Tsy handaitra anefa izany raha mpitari-bato vilam-bava ianao.
“Misy zavatra efa averintsika injato amby arivo fa hoatran’ny tsy henoin’ny zanatsika mihitsy. Raha vao tsy mifanaraka amin’izay lazaintsika anefa ny ataontsika, dia hiteny antsika izy. Hitany daholo izay ataontsika, na dia heverintsika fa tsy hitany aza.”—Nicole.
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Ny fahendrena avy any ambony kosa ... tsy mihatsaravelatsihy.”—Jakoba 3:17.
Diniho izay ataonao. Tsara fanahy amin’ny vady aman-janakao ve ianao? Olona hoatran’ny ahoana ny namanao? Hoatran’ny ahoana ny fialam-boly ataonao? Tia manampy ny hafa ve ianao? Raha tsorina dia hoe: Manome modely ho an’ny zanakao ve ianao?
“Tsy asainay manao an’izao na izao ny zanakay, raha izahay mivady aza tsy mahavita an’ilay izy akory.”—Christine.
Miezaha hiala tsiny rehefa diso. Efa fantatry ny zanakao hoe tsy lavorary ianao. Raha nanao zavatra tsy nety tamin’ny vadinao na tamin’ny zanakao àry ianao, dia miezaha hiteny hoe “azafady” na “mifona.” Ho tsapany amin’izay hoe tena ilaina ny manetry tena sy mitsotra rehefa diso.
“Mora miaiky fahadisoana ny ankizy, raha henony manao an’izany isika ray aman-dreny, na henony miala tsiny rehefa diso.”—Sabine.
“Tena misy vokany amin’ny zanatsika ny zavatra ataontsika ray aman-dreny. Toy ny boky mivelatra andro aman’alina ny modely omentsika. Io no fomba tsara indrindra ampianarantsika azy ireo.”—William.
Ampio ny Zanakao mba Hahay Handray Andraikitra
Hanampy anao hahay hitaiza tsara ny zanakao ny modely nomen’i Jesosy. Amin’ny fomba ahoana?
Hizara Hizara 8: Miezaha ho Modely
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Torohevitra 12 Mahasambatra ny Fianakaviana
Raki-peo Fandikana raki-peo MIFOHAZA! Torohevitra 12 Mahasambatra ny Fianakaviana
Hizara Hizara MIFOHAZA! Torohevitra 12 Mahasambatra ny Fianakaviana
Torohevitra 12 Mahasambatra ny Fianakaviana
MIFOHAZA! Torohevitra 12 Mahasambatra ny Fianakaviana
Ahoana Izany Ray Aman-dreny Mahay Mitaiza Izany?